DHAGEYSO: Ciidamo shaqada laga eryay oo kashifay Qorshe halis ah oo ka socda Xero ay maamulaan Imaaraadka Carabta - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Saraakiisha dowladda Imaaraadka Carabta ee Muqdisho ku tababarra ciidamada milateriga Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay inay shaqada ka eryeen ciidamo badan oo ka tirsan kuwii ay tababarreen.
Sida ay sheegeen saraakiil iyo ciidamo laga eryay ciidamada Imaaraadka ayaa waxay arrintan ka danbeysay kadib markii ciidamada ka biyo diideen qorsha saraakiisha Imaaraadka wateen oo ah inay ciidamadaasi noqdaan kuwa Imaaraad ah oo ka amar qaata saraakiishaasi.
Saraakiisha saxaafadda ka hadashay ayaa sheegay in Milaterigii Imaaraadka ay si xun ula dhaqmeen oo denbiyo been ah ku soo oogeen, waxayna dowladda Soomaaliya ugu baaqeen inay arrintaasi soo farageliso.
Waxay sheegeen in Imaaraadka ay u joogaan Soomaaliya inay qortaan ciidamo Soomaali oo calooshood u shaqeystayaal ah tiradooduna gaareyso 15,000 askari.
Imaaraadka ayaa ka mida dalalka ciidamada u tababarra dowladda Soomaaliya, waxaana hadda soo baxaya inay ciidamadaasi ahaayeen kuwo ay iyagu doonayeen inay qaataan.
Saraakiisha laga soo eryay xerooyinka ay maamulaan Imaaraadka ee duleedka Muqdisho ayaa dowladda federaalka ka codsaday inay arrimahooda wax ka qabtaan.
Previous articleCanshuur kordhin lagu sameeyay Qaadkii imaan jiray Muqdisho & Ganacsatada oo ku kala jabtay
Next articleRa’iisal wasaaraha magacaaban ee Xasan Kheyre oo farriin degdeg ka helay Ra’iisal Wasaaraha Turkiga